လုပ်ငန်းတာဝန်များ | General Administration Department
အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် မြေပြင်လက်ရှိလူဦးရေစာရင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုအခြေအနေအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Home » ဌာနအကြောင်း
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအပေါ် နှောက်ယှက်ကျူးလွန်မှု များရှိလာပါက တိုင်ကြားနိုင်သည့် ဖုန်းနှင့် Viber နံပါတ်များ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ကျင့်သုံးသည့် ဥပဒေ၊ တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ
(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့က ချမှတ်ပေးသော လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊
(ခ) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊
(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ပင်မလုပ်ငန်းတာဝန်များ၊
(ဃ) အခြားဝန်ကြီးဌာနက ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများအား အောက်ပါအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည် -
(က) ပုဒ်မ (၂၆၀) အရ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အကြီးအမှူးသည် ရာထူးအလျောက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးလည်းဖြစ်သည်။
(ခ ) ပုဒ်မ(၂၈၇)အရ နေပြည်တော် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အကြီးအမှူး သည် ရာထူးအလျောက် နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး ဖြစ်သည်။
(ဂ ) ပုဒ်မ (၂၈၈ ) အရ ခရိုင်အဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝမ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် (၈/၈၈) စကားရပ်များ အစားထိုးသည့် ဥပဒေအရ ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၆-၆-၁၉၈၉ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၈၉)ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနက ကျင့်သုံးရန်အပ်နှင်းထားပါသည်-
(က) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စည်းကမ်းသေဝပ်တည်ငြိမ်ရေး ပျက်ပြားစေမည့် လုပ်ရပ်များအား တားမြစ်ခြင်း၊
(ခ ) အများပြည်သူ စိတ်ငြိုငြင်စေမည့် နှောင့်ယှက်မှုများ ဖယ်ရှားစေခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော အစုအဝေးကို လူစုခွဲရန် အမိန့်ပေးခြင်း၊ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းရုံးများရှိ စာ၊ ကြေးနန်းနှင့် ချောထုတ်များကို ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ စုံစမ်းမှုအတွက် လိုအပ်လျှင် ထုတ်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ များကို ညွှန်ကြားခြင်း၊
(င ) လက်နက်ဥပဒေအရ ပြစ်မှုများကျုးလွန်သူကို တရားစွဲဆို ခွင့်ပြုမိန့်ပေးခြင်း၊
(စ ) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း (မြေ၊ အိမ်)တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုကြောင့် အေးချမ်းသာယာရေးကို ထိခိုက်လာပါက ဝင် / ထွက်မှုကို တားဆီးခြင်း၊
(ဆ ) လောင်းကစားအိမ်သို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရန် ဝရမ်းထုတ်ပေးခြင်း၊
(ဇ ) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အဆောက်အဦး၊ မြေ စသည်တို့တွင် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပါက ဖယ်ရှားခြင်း၊ အငြင်းပွားပစ္စည်းများကို စာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဈ ) တရားရုံးသို့ သက်သေခံအဖြစ် တင်ပြခြင်း မပြုရသေးသော သိမ်းဆည်း ထားသည့် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပင်မလုပ်ငန်းတာဝန်များအဖြစ် အောက်ပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်-
(၁) နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေများကို မြေများကို ပုဂ္ဂလိက/ ဌာနဆိုင်ရာ မြေငှားဂရန်၊ စက်မှုမြေငှားဂရန်များခွင့်ပြုချထားခြင်း၊
(၂) အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေဂရန်များ ခွင့်ပြုချထားခြင်း၊
(၃) ဗဒ္ဓသိမ်မြေဂရန် ခွင့်ပြုချထားခြင်း၊
(ခ ) ယစ်မျိုးစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်း
(၁ ) နှစ်စဉ်ယစ်မျိုးအစီအစဉ်များရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊
(၂) နှစ်စဉ်ယစ်မျိုးလိုင်စင်များ ခွင့်ပြုချထားပေးခြင်း၊
(၃) အရက်ချက်လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်သောအရက်များအား ဓါတုဗေဒဝန်ထံစစ်ဆေးခံရန်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ ) အခွန်(၄)မျိုးကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း
(င) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သတ်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
(စ) အသင်းအဖွဲ့များ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရေးလုပ်ငန်း
(ဆ) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
(ဇ) မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း
(ဈ) မြို့၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း
အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် မိမိ၏ ပင်မလုပ်ငန်းတာဝန်များအပြင် အခြား ဌာနများမှ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးကြ ရပါသည်။ ယခုလက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-
(က) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုစီးဌာန၏ ၁၀-၃-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ အခရ/ အင်ဒီ - အီးဒီ/ ၉၃၀ အရ စက်မြင်းကောင်ရေ (၂၀)ထက် မပိုသော စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်များ စစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
(ခ ) လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၃၁-၁၀-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃-၅/၅၁ အပိုင်း ၂ (၈၉) ၁၆၅၆ အရ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ ) ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀-၉-၁၉၈၉ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅) အရ ရုပ်ရှင်ပြသရန်နေရာအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ အပ်နှင်းထားသော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း-
(၁) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၈-၆-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘ-၂(၄) ၇/၃(၈၉)နှင့် ဘ-၂(၄) ၇/၅(၈၉)နှင့် ၁၉-၈-၁၉၉၁ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘ-၂(၄)/၇၃(၈၉)(၃၈၇/၉၀)တို့အရ အငြိမ်းစားယူသော သို့မဟုတ် အငြိမ်းစားမယူမီ ကွယ်လွန်သော ဝန်ထမ်းများအတွက် ယာယီအငြိမ်းစားလစာနှင့် ဆုငွေများ ကြိုတင်ထုတ်ပေးရေးကိစ္စ။
(၂) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၈-၆-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘ-၂(၄)၇/၄(၈၉)အရ တစ်လုံးတည်းပင်စင် လဲလှယ်ရေးအတွက် အငြိမ်းစားများတင်သွင်းသော လျှောက်လွှာများ ဆောင်ရွက်ပေးရေး ကိစ္စ။
(၃) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၈-၆-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘ - ၂(၄) ၅ / ၂ (၇၉၉/၈၈) အရ ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်လာသော အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပြုရေးကိစ္စ။
(၄) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၈-၆-၁၉၈၉ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘ-၂(၄) ၇/၂(၈၉)နှင့် ၂၀-၅-၁၉၉၃ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘ-၂(၄) ၇/၂ (၈၉) (၉၂/၉၃)တို့အရ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ အစည်းများမှ ကွယ်လွန်သူအငြိမ်းစားများအတွက် ထုတ်ပေးရန် ကျန်ရှိသော အငြိမ်းစားလစာငွေများထုတ်ပေးရေးကိစ္စ။
Copyright © 2013 General Administration Department. All rights reserved. Powered by : Information Matrix